Guddi-sare oo dab-damis dab-damis ah oo loogu talagalay qurxinta badda, Shiinaha Xakamaynta Cadaadiska Sare ee malabka malabka loogu talagalay soosaarayaasha badda, Soo-saareyaasha, Warshad - Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd
Cadaadiska Sare ee dabka Dabaqa Moolka malab malab leh ee qurxinta badda
HPL-ka malabka malabku waa nooc ka mid ah guddi rooti culeyskiisu yar yahay oo ka kooban laminate cadaadis sarreeya sida walxaha wajiga, iyo malab-ka aluminium sida asaasiga ah. Waxay bixisaa sifooyin farsamo sare iyo qaababka dabka oo wanaagsan.
HPL (laminate cadaadis sarreeya) guddi-malabku waa guddi sandwich ah oo ku xiran walxaha lakabka lakabka lakabka sare iyo gudaha malabka aluminium. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa badda dhexdeeda si loo yareeyo culeyska dhismayaasha, qalabka iyo alaabta guriga, iyadoo la ilaalinayo sharafta iyo astaamaha farsamada.
Isku darka dhumucda guud Caadi: 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm
Gudida malab dhagxaanta
Mashiinka qulqulaya otomatiga （BHM-GP-A600）
Biyaal malab-caano aramid ah oo is-ballaadhis ah oo loogu talo galay daboolida gogosha rooti dabacsan
Xagga sare 10MPa xoog isugeynta ayaa balaariyay aluminium malab bartamihiisa